Matio 15 - Ny Baiboly
Matio toko 15
Ny lovantsofina tsy izy - Ny fanafintohinana tsy misy antony - Ilay vehivavy kananeana - Fampitomboana mofo indray.
1Tamin'izay nisy mpanora-dalàna sy Farisiana avy teny Jerosalema nanatona azy ka nanao hoe: 2Nahoana ny mpianatrao no mandika ny lovantsofin-drazana? fa tsy mba manasa tànana izy raha hihinan-kanina. 3Ary hoy ny navaliny azy: Nahoana kosa hianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny lovantsofin-drazanareo? 4Fa hoy Andriamanitra: Manajà ny rainao aman-dreninao; ary koa: Izay hanozona ny rainy na ny reniny dia hovonoina ho faty. 5Fa hoy kosa hianareo: Na zovy na zovy hilaza amin'ny rainy na amin'ny reniny hoe: Efa natolotro an'Andriamanitra ny tokony ho nentiko manampy anao, 6dia afaka tsy hanaja ny rainy na ny reniny akory izy; koa nofoananareo ny didin'Andriamanitra noho ny lovantsofinareo. 7Ry mpihatsaravelatsihy, marina ny naminanian'Izaia anareo hoe: 8Ity vahoaka ity manaja ahy amin'ny molony, fa ny fony lavitra ahy; 9koa foana ny ivavahan'izy ireo amiko, satria didin'olombelona no ataony fampianarana.
10Ary rahefa nasainy hanatona azy ny vahoaka, dia hoy izy taminy: Hainoy, ary fantaro: 11tsy izay miditra amin'ny vava no mahaloto ny olona; fa izay aloaky ny vava, izany no mahaloto ny olona. 12Dia nanatona azy ny mpianany ka nilaza taminy hoe: Fantatrao va fa tafintohina ny Farisiana nandre izany teny izany? 13Ary hoy ny navaliny azy ireo: Ny voly rehetra nambolen'ny Raiko izay any an-danitra dia hongotana. 14Avelao izy, fa jamba mitari-dalàna ny jamba; ka raha misy jamba mitari-dalàna ny jamba, dia hianjera any an-kady izy roroa. 15Namaly Piera nanao taminy hoe: Lazao anay ny hevitr'izany fanoharana izany. 16Hianareo koa va, hoy izy, mbola tsy mahalala ihany? 17Moa tsy fantatrareo va fa izay rehetra miditra amin'ny vava dia midina any an-kibo ka ariana any an-katakonana? 18Fa izay mivoaka amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo, ka izany no mahaloto ny olona. 19Satria ny fo no ihavian'ny hevitra ratsy, ny famonoana olona, ny fakam-badin'olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny ampanga lainga, ny vava ratsy: 20izany no mahaloto ny olona; fa ny mihinana tsy misasa tànana, tsy mahaloto ny olona akory.
21Niala teo Jesoa, dia nankany amin'ny faritanin'i Tira sy Sidona. 22Ary indro nisy vehivavy kananeana anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany niantsoantso mafy nanao hoe: Mamindrà fo amiko, ry Tompo, Zanak'i Davida, fa ampijalian'ny demony mafy loatra ny zanako vavy; 23fa tsy namaly azy Jesoa na dia indraim-bava aza. Dia nanatona niangavy taminy ny mpianany nanao hoe: Roahy izy, fa mikiakiaka manaraka antsika. 24Ary hoy ny navaliny azy: Tsy nirahina afa-tsy ho an'ny ondry very amin'ny taranak'Israely aho. 25Fa nanatona ihany ravehivavy ka niankohoka teo anatrehany, ary nanao hoe: Tompo ô! vonjeo aho! 26Nefa novaliany hoe: Tsy mety raha ny mofon-jaza no alaina ka atsipy ho an'ny amboa. 27Ary hoy ravehivavy: Marina izany, Tompoko, nefa ny amboa kely mba mihinana ny sombitsombiny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. 28Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Ravehivavy, lehibe ny finoanao, aoka ho tanteraka aminao araka izay irinao. Dia sitrana tamin'izany ora izany ihany ny zanany vavy.
29Rahefa niala teo Jesoa, dia nankany amoron'ny ranomasin'i Galilea, ary niakatra tany an-tendrombohitra izy ka nipetraka teo. 30Maro ny vahoaka nanatona azy teo, nitondra ny moana, ny jamba, ny mandringa, ny kilemaina mbamin'ny marary hafa betsaka, sy nametraka azy teo an-tongotr'i Jesoa dia nositraniny, 31àny ka gaga dia gaga ireo vahoaka rehetra ireo nony nahita ny moana niteny, ny mandringa afa-mandeha, ny jamba nahiratra, ka nankalaza an'Andriamanitr'Israely izy ireo.
32Ary niantso ny mpianany Jesoa, ka nilaza taminy hoe: Mampalahelo ahy ireto vahoaka, fa efa hateloana izay no tsy nisarahany tamiko, ka tsy manan-kohanina izy: tsy tiako ny hampody azy tsy homan-kanina, sao dia reraka eny an-dàlana izy. 33Fa hoy ny mpianany taminy: Aiza no ahazahoanay mofo ampy hahavoky ireo vahoaka be ireo atý an'efitra? 34Ary hoy Jesoa taminy: Manana mofo firy hianareo? Fito, hoy ireo taminy, sy hazandrano madinika vitsy foana. 35Dia nasainy nipetraka tamin'ny tany ny vahoaka; 36ary noraisiny ny mofo fito sy ny hazandrano, dia nanaovany fisaorana sy novakiny ka nomeny ny mpianany, ary ny mpianany kosa nanome ny vahoaka. 37Dia nihinana izy rehetra ka voky, ary sobika fito no feno ny sombintsombiny sisa tsy lany nangonina; 38nefa efatra arivo lahy no nihinana teo afa-tsy ny zaza amam-behivavy. 39Nony nampody ny vahoaka izy, dia niondrana an-tsambo kely ka nankany amin'ny tany Magedana. >